Yopokki Cheese at Best Price in Myanmar | ssshopping.com.mm
Cheese အရသာလေးနဲ့ Cheese Yopokki ကတော့ အစပ်မကြိုက်သူတွေဖို့ cheese အရသာ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ သိပ်လည်း မချို၊ သိပ်လည်း မစပ်တော့ Yopokki fans တွေ ကြိုက်မှာ သေချာတယ်နော်။
Yopokki Cheese has rich flavour of cheese mixed well with rice cakes. Yopokki provides authentic taste of Korean topokki.
Cooking duration- 7min